MIAMI TOAMASINA – Madatopinfo
Manomboka ny fanatanterahana ny tetikasa Miami, izay hanova endrika tanteraka ny morondranomasin’i Toamasina ka hanintona sy hampiroborobo ny fizahantany ary hampiakatra ny toe-karena. Ho vita ihany koa ny Boulevard Ratsimilaho, izay fotodrafitrasa tsy nisy nijery an-taonany maro. Natao fanajariana manontolo izy ity mba tsy ho mora ravan’ny loza voa-janahary tahaka ny teo aloha intsony.
Afa-pahasahiranana amin’ny fitohanan’ny fifamoivoizana kosa ireo mpampiasa ny lalana mampitohy an’i Morafeno sy ny Hopitaly Be satria vita soamantsara ny asa fanamboarana ary natolotry ny Filoham-pirenena tamin’ny fomba ofisialy nandritra izao diany tao Toamasina izao izany. Ity lalana ity moa dia natao « betôn » ary manaraka ny fenitry ny lalan-dehibe rehetra.